Warka - Wax-ku-oolnimada Shaaha Shaaha
Dib-u-heshiisiinta Cudurka iyo Caloosha
Nectar ubax Jarmal wuxuu ka kooban yahay xaddi badan oo fiitamiin C ah, iyo miraha iyo ubaxyada kala duwan waxay leeyihiin astaamo u gaar ah. Kuwaas waxaa ka mid ah, canab macaan dhadhan ahaan, dao dabiiciyan deggan, waxay nafaqeysaa beerka iyo kilyaha, waxay nafaqeysaa qi iyo dhiigga, waxay sare u qaaddaa dheecaanka jirka, waxay kor u qaaddaa kaadi; Baaylayda iyo liinta diirtu waxay daaqdaa cuntada waxayna xoojisaa caloosha, waxay kordhisaa rabitaanka cuntada; ubax kacay wuxuu leeyahay dhadhan qadhaadh, qabow dabeecadda, wuxuu nadiifiyaa kuleylka iyo qoyaanka, wuxuu baabi'iyaa dabaysha, wuxuu kobciyaa wareegga dhiigga, wuxuuna sunta saaraa; Rose wuxuu leeyahay dhadhan macaan, dabeecad diiran, wuxuu dhiirrigeliyaa qi wuxuuna yareeyaa niyad-jabka, xanuunkana wuxuu ka yareeyaa dhiigga. Saamaynta kaladuwan way ka duwan tahay, dhammaantoodna waxay la xiriiraan hagaajinta qiiqa beeryarada iyo caloosha.
Shaaha ubaxa ubaxu wuxuu daaweyn karaa hargabka. Waa fitamiin C-ga firfircoon ee ku jira shaaha laftiisa. Faytamiin C wuxuu hagaajin karaa difaaca jirka wuxuuna xoojin karaa awoodda jirka ee iska caabbinta cudurrada. Cabitaanka koob shaah miro ah ayaa runtii u dhigma cabitaanka koob casiir cusub ah. Jarmalka dhexdiisa, dadka qaarkiis waxay badanaa u isticmaalaan nectar ubax hab waxtar u leh oo lagu daweeyo cudurada leh daroogada, iyagoo u maleynaya inay gaabin karto habka cudurka.
Ubaxa nectar waxaa laga sameeyaa miraha leh ubaxyo iyo shaah, waxaana la sheegaa inuu leeyahay taariikh boqolaal sano ah. Guud ahaan reer yurubiyanku waxay jecelyihiin inay cabaan kafee, laakiin dadka jarmalka ah, ubax iyo shaah nectar waa qayb muhiim ah oo ka mid ah cuntadooda. Ma aha oo keliya waayeelka Jarmalka ah ee jecel inay cabaan, laakiin haweenka Jarmalka ayaa sidoo kale u arka shaahani inuu yahay shey qurux badan oo lama huraan ah.
Waxaa jira dhadhan badan sida Paris Champs, jacayl aan xadidnayn, riyo buuxda, hibiscus biyaha, qaabka yurub, marwada quruxda badan, kaynta madow, dareenka xagaaga, kalgacalka buluuga, iwm.
Ubaxa saafiga ah iyo shaaha miraha waxaa loo qaybiyaa 4 dhadhan: Paris Champs, Blue Melancholy, Loverrained Lover, Purple House Magic Medicine, dhammaantood waxay leeyihiin faa'iidooyin u gaar ah adduunka caafimaadka.
Waxa loogu yeero shaaha nectar ubax wuxuu ku saleysan yahay miraha miraha iyo ubaxyada iyo caleemaha dawada Shiinaha oo ah maaddooyinka ugu muhiimsan, kuwaas oo ku habboon rhizomes iyo daawooyinka kale ee Shiinaha. Waa mid cusub oo dabiici ah, caafimaad leh, oo aan sun lahayn iyo waxyeellooyin.